Google Earth 7 dia mametra ny fakana sary namboarina ortho - Geofumadas
Febroary, 2013 AutoCAD-Autodesk, Google Earth / Maps
Rehefa efa hivoaka ny dikanteny vaovao an'ny Plex.Earth 3, dia takatsika fa na dia manohana ny fandefasana ireo serivisy sarintany amin'ny serivisy aza izy, ny tombony lehibe izay efa vitany hatreto mba hahafahanao misintona ny sarin'ny Google Earth voalahatra ... tsy ho tena mora
Izany dia noho ny Google, mitady hisorohana ireo mpampiasa niditra tamin'ny alàlan'ny fisamborana ActiveX hamokatra sary ortho, dia nanidy ny dikan-teny maimaimpoana hamoahana ny tany, izay nanodinkodinana ilay sary miorina amin'ny maodely nomerika. . Io koa dia hisy fiantraikany amin'ireo nividy kinova Stitchmaps tamin'ny fomba mitovy sy ireo izay nanao izany tamin'ny alàlan'ny fanontana printy ary nanatevin-daharana azy ireo tamin'ny Photoshop.
Tsaroako ny nitondrako ity lohahevitra ity taloha niaraka tamin'i Tomás, mpamorona an'i Cartesia, momba ny kafe tamin'ny taon-dasa. Tena toa sarotra tokoa ny Google rehefa afaka nanao sonia fifanarahana tamin'ny PlexScape mba hanomezana azy ny mety ho nolavin'ny AutoDesk hatramin'ny nanontana AutoCAD 2013. Ary io, rehefa mividy sary zanabolana miaraka amin'i Geoeye isika, ny iray amin'ireo fandraràna dia ny fanaparitahana amin'ny Internet; ny tsara indrindra azonao atao dia ny mametraka faritra kely amin'ny vahaolana avo lenta na fampisehoana feno amin'ny habe mihena. Mampihomehy ihany ny faneken'izy ireo izay ataon'ny Plex.Earth hatramin'ny andiany faha-6 an'ny Google Earth.
Miaraka amin'izany, ireo mpampiasa dia afaka manohy manao izany amin'ny Google Earth 6 na amin'ny fividianana ilay kinova mandoa izay mitentina 400 dolara, araka ny nolazain'i José taminay Blog GIS & AutoDesk.
Nandritra ny fotoana fohy dia nanomboka nizaha toetra momba ny faritra topografia fisaka aho, ary hitako fa kely kokoa ny fanodikodinana; izany dia eo anelanelan'ny 3 sy 7 metatra. Saingy rehefa mizaha faritra tsy mitovy aho dia hitako fa tsy mampidi-doza ny valiny.
Andeha hojerentsika ity ohatra manaraka ity, fa ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia nisafidy laha-tsoratra iray izay ahitana ny fetran'ny sary avo lenta avo kokoa, mihoatra ny havoana mihoatra ny 200 metatra ny haavony:
Hatramin'ny farafaharatsiny dia eo an-toerana, ny fanelingelenana vokatry ny fanamaivanana dia tsy hita taratra, na dia miharihary fa amin'ny farany dia misy araka ny aseho amin'ny sary manaraka rehefa mankany ankavia sy ankavanana isika.
Andao alao sary an-tsaina izao ny fanandramana efijery sy ny fiezahana manamboatra zavatra toa an'ity. Azo antoka fa miaraka amin'ity Google ity dia mandray dingana lehibe na amin'ny kinikany voaloa mba hivarotra bebe kokoa, ary hisorohana ny fanitsakitsahana ny fisintomana be dia be.
Mandritra izany fotoana izany, hamaha ny olana, Plex.Earth dia nanampy tamin'ny version 3 Misy karazana sasany toy ny:
Ny fahafahana manohana ny WMS, izay ahafahantsika mametaka sary sy sarintany ara-jeografika dia nanolotra ireo fenitra OGC avy amin'ny IDEs ofin'ny firenena tsirairay.
Ny fahafahan'ny fampidinana sary avy amin'ny BingMaps, izay na dia tsy manana fandrakofana mitovy aza dia mahatratra bebe kokoa isan'andro. Izy io koa dia manohana ny OpenStreet Maps.
Ny fiovana amin'ny dikan-teny vaovao:
Ny maodelin'ny fahazoan-dàlana Standard-Pro-Premium dia nesorina, izay samy manana ny fahaizany miovaova tsikelikely ny dikanteny tsirairay. Ankehitriny misy dikanteny manana ny zava-drehetra.
Ny modely vaovao dia ny Business Edition and Enterprise Edition, miaraka amin'ny fahaiza-manao rehetra ary samy hafa ny isan'ireo milina.
Raha ny kinova Business dia misy ny vidin'ny fahazoan-dàlana tokana, ary iray hafa hividianana licence 2 ka hatramin'ny 10. Miaraka amin'ny tombony azo ampiasaina amin'ny masinina roa ny fahazoan-dàlana, ohatra, any amin'ny birao sy ao an-trano, na amin'ny solosaina PC sy amin'ny solosaina finday. Azo antoka fa tsy azo ampiasaina miaraka.
Raha ny fahazoan-dàlana Enterprise, misy vidiny 10 licence, izay azo ampiasaina amin'ny masinina roa avy koa; na 20 ny fitambarany. Ny mahasarika an'io dia ho an'ny orinasa, satria mitsingevana izy ireo, mba hahafahan'izy ireo ampiasaina amin'ny masinina mifandraika amin'ny tamba-jotra, amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana hisamborana fahazoan-dàlana misy ary hijerena hamoaka azy.
Amin'ny farany, ny vidiny dia ho mora kokoa raha jerentsika ny milina roa.
Fantatsika fa amin'ny tapaky ny volana febroary ity ity version of Plex.Earth ity dia ho azo ampiasaina, izay heverintsika fa ny toetran'ny Map Explorer izay ahitana ny mozika vaovao dia toa mahafinaritra.
Previous Post«Previous 2 fandaharam-pianarana Cadastre notarihan'ny OAS
Next Post Inona no mety ho ao ambadiky ny fametraham-pialan'ny Papa Benoitmanaraka »
3 Ny valiny "Google Earth 7 dia mametra ny fakana sary namboarina ortho"
Kıvanç hoy izy:
Ny toe-javatra dia misy fiantraikany amin'ny fotoana tianao hijerena rakotra mba hiaraka aminy ho toy ny mozika.
Raha hivezivezy amin'ny ankapobeny, dia tsy misy olana, tsy misy ny fanovana, afa-tsy ny tsy hetezan'ny faritra.
Artur Castillo hoy izy:
Salama, manao ahoana ny sakaizanao avy any Geofumadas? Jereo raha azoko, ka midika ve izany fa amin'ny Google Earth 7 vaovao dia ho voafitaka kokoa ireo sary? Ka very ny kalitao rehefa alaina na zahana amin'ny GE ihany? Mbola manana ny version 6.3 aho ... raha marina ny anao dia miharihary fa ataon'izy ireo izany ka amidy miaraka amin'ny fahazoan-dàlana ny GE, mandalo lefona .. miandry ny valinteninao aho namako g!